Harooyinka Daadinta & Qalabka Dayactirka Harada - Ellicott Dredges
Haro-qoynta & Dayactirka
Ellicott Dredges naqshadeynta, soo saarista iyo gaarsiinta nuugista cutterhead iyo jaranjarada wareegaya ku habboon noocyo kala duwan oo badan oo mashaariic qodidda harada ah.
Qodidda haro waxay qaadataa waqti iyo qorshe habboon. Kahor bilowga mashruuc, waxaa muhiim ah in la baaro dhammaan xulashooyinka qashin qubka ee jira, kharashyada, iyo yoolalka lagu gaarayo qodaalka. Waxaad ubaahan doontaa inaad hubiso inay jirto lacag la heli karo si loogu guuleysto qorshaynta iyo fulinta mashruuca iyo sidoo kale daboolida wixii kharash dheeraad ah ee suurtagal ah.
Harooyinka badankood waxaa lagu quudiyaa qulqulka webiyada ama webiyada laga yaabo inay ku jiraan waxyaabo wasakheysan wasakhda iyo noocyo badan oo macdan ah. Qalabkani wuxuu waxyeello u yeelan karaa caafimaadka guud ee harada waxayna saameyn ku yeelan karaan howlaha madadaalada sida kalluumeysiga, dabaasha, iyo doonyaha. Waqti ka dib, maaddooyinka sida nafaqada isku urursan waxay hafin kartaa haro, taas oo u oggolaaneysa dhirta iyo ubaxyada algae inay koraan.
Qodista ayaa gacan ka geysan karta kahortagga koritaanka dhirta ama ubaxyada algae - xaaladaha qaarkood qodista waxay gacan ka geysan kartaa dib u celinta geedi socodka iyadoo la wanaajinayo tayada biyaha guud ahaan. Qodista waxay ku dari kartaa qoto dheer harada, abuurista meel kalluunka ah iyo baabi'inta xaaladaha ciriiriga ah ee oksijiin-ka xanniban. Lahaanshaha aagag qoto dheer oo biyo ah ayaa si gaar ah faa'iido ugu leh kalluunka ku nool harooyinka qaboojiya xilliga qaboobaha. Qalabka, sida ciidda, ee laga soo faaruqay harada ayaa sidoo kale dib loo isticmaali karaa si loo buuxiyo xeebaha ama mashaariicda dib u soo celinta ee u dhow.
Barnaamijyada Kala Bixinta Harooyinka
Miyaad ka tirsan tahay ururka mulkiilayaasha guryaha (HOAs) ama degmo tixgelinaysa inay maal gashato barnaamijka dayactirka harada? Barnaamijyada qodidda harada ayaa ilaaliya caafimaadka guud, badbaadada, tayada biyaha, iyo u socodka harada. Qaar ka mid ah go'aamiyeyaasha waxay u arkaan qiimaha hore ee barnaamijyada noocan oo kale ah inay aad qaali u yihiin in la maalgeliyo halkii ay u arki lahaayeen qodista inay tahay xalka muddada dheer waxtarka leh.
Qaar badan oo ka mid ah HOAs markii ay ku tiirsanaayeen maalgelinta dowladda hoose waxay aasaaseen ururo aan faa'iido doon ahayn iyo degmooyin gaar ah oo canshuuraha ah si ay iskood u maal-gashadaan mashaariicda qodidda harada. Degmooyinka taageera barnaamijyada qodidda harooyinka ayaa sidoo kale ka faa'iideysan kara dakhliga canshuuraha mustaqbalka taasoo ay ugu wacan tahay xaaladaha harooyinka oo soo hagaagaya oo la jaanqaadi kara howlaha firaaqada sida kalluumeysiga, dabaasha, iyo doonyaha. Haro si sax ah loo dayactiray waxay soo jiidan doontaa dadka soo booqda kuwaas oo diyaar u ah inay waqti badan ku qaataan hareeraha hareeraha iyo hareeraha iyagoo siinaya kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah.
Mashruuca qulqulka harada ayaa noqon kara mid qaali ah. Aad bey muhiim utahay in loo diyaariyo kharashaadka laxiriira oo ay kamid yihiin *:
Naqshadaynta injineernimada iyo rukhsadaha
Kharashka hawlgalka ee barnaamijyada qoditaanka ee gudaha iyo qiimaha shaqada ee uu qabto qandaraasle
Qaadista iyo hagaajinta qalabka
Qaadista iyo daadinta alaabada duugoobay
* Liisaska kharashaadka la rajeynayo in macnaheedu maahan liistada dhammaan kharashyada la xiriira mashruuca burburay.
Ogolaanshaha Hareynta Harada
Tilmaamaha helitaanka ruqsadda harada ee harada waxay ku kala duwan yihiin hadba halka mashruucu ku yaal. Macluumaad dheeri ah, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto magaaladaada, degmadaada, ama dowladda gobolka wixii faahfaahin dheeri ah.